Araho ny lamina voajanahary | NewsMada
Araho ny lamina voajanahary
Par Taratra sur 04/12/2019
Raha nisy ny rafitra nanimba sy namotika ny fiainan’ny Malagasy, nitana ny laharana voalohany ny fampianarana sy ny fanabeazana. Tsy nanana fanapahan-kevitra na tsy navela nanapa-kevitra ihany koa, angamba, ny Malagasy tamin’io lafiny iray io. Ilay rafitra navelan’ny Frantsay ihany no mbola notohizana aty aoriana. Namboaboarina fa tsy novana hifanaraka amin’ny zava-misy iainan’ny Malagasy. Taona 1960 niverenan’ny Fahaleovantena ka hatramin’izao, toa vao mainka aza nihamafy ny fanilikilihana ny fitaizana sy ny fanabeazana malagasy izay nifaka tanteraka amin’ny lamina voajanahary.
Manana ny fiteniny ny Malagasy ka maninona no ankatoavina sy ampirisihina eto Madagasikara ny fampianarana ny zanaka malagasy amin’ny fiteny vahiny? Mifanipaka tanteraka amin’ny lamina voajanahary izany. Manamafy io ny fanambaran’ny sampandraharahan’ny Firenena mikambana misahana ny kolontsaina sy ny fanabeazana (Unesco) manao hoe: « tsy misy firenena iray ka handroso amin’ny alalan’ny fampianarana ny taranany amin’ny fitenin’ny firenen-kafa ».
Vokatr’io tranga iray io, mihevi-tena ho vahiny ny Malagasy, indrindra fa ny ankizy sy ny tanora. Tranga azo adika ihany koa hoe tsy tompon’i Madagasikara intsony ny Malagasy, na vahiny eto amin’ny taniny ny Malagasy. Fampandrosoana tahaka inona ny andrandraina amin’ny olona tahaka izany? Tsy mahagaga raha ry zareo vahiny indray no misarisary zoro ho tompon’ity tany ity! Na efa mibodo mihitsy aza angamba?
Mila arahina ny lamina voajanahary. Ny Malagasy mahay manabe ny zanany ho Malagasy fa tsy mila kisarintsarim-panabeazana tefitefena avy any ivelany. Mahavariana anefa fa toa tsy takatry ny ray aman-dreny niteraka sy ny raiamandreny mpanabe intsony izany. Sao mba izy ireo ary no tokony hobeazina voalohany? Fitaratra mangavoka!